Imifanekiso yeBritish India
Imephu yeHindostan okanye iBritish India
Imephu ye-1862 ibonisa impahla yaseBrithani eHindoostan, okanye eNdiya. Getty Images
Imifanekiso yezityalo zeRaj
Ingubo yeBrithani yoBukumkani baseBrithani yayinguNdiya, kwaye imifanekiso kaThe Raj, njengeBritish Indiya yaziwa, yayinomdla kuluntu.
Eli jolisa linika isampula yeempapasho zangekhulu le-19 ezibonisa indlela iBritish Indiya yaboniswa ngayo.
Yabelana ngalokhu: Facebook | Twitter
Imephu ye-1862 ibonisa iBrithani eNdiya kwinqanaba layo.
Abantu baseBrithani bafika kuqala e-Indiya kwiminyaka yokuqala ye-1600 njengabahwebi, ngendlela ye-East India Inkampani. Kwiminyaka engaphezu kwama-200 le nkampani inxaxheba kwidibano-diplomacy, inzondo kunye nemfazwe. Ukutshintshiselwa iimpahla zaseBritani, ubuncwane baseIndiya babuyela eNgilani.
Ngokuhamba kwexesha, amaBrithani anqoba ininzi yeIndiya. Ubukho bempi yaseBrithani abuzange bube bunzima, kodwa abaseBrithani basebenzise imikhosi yemveli.
Ngo-1857-58 ukuvukela ngokukrakra ngokulawula ubuBrithani kwathatha inyanga ukuba zithinte. Kwaye ngasekuqaleni kwe-1860s, xa le mephu yashicilelwa, urhulumente waseBrithani uphelile iNkampani ye-East India kwaye uthathe ulawulo olupheleleyo lwe-Indiya.
Kwikona eliphezulu eliphezulu le mephu ngumzekeliso weNdlu kaRhulumente ecacileyo kunye noNondyebo kwiCalcutta, uphawu lolawulo lwaseBrithani lwaseIndiya.
Amacwecwe eArmed Army. Getty Images
Xa inkampani yaseMpuma India yayilawula iIndiya, yenza njalo ngokukhululekileyo namasosha asekuhlaleni.
Amajoni asekuhlaleni, awaziwa ngokuba yiiSepoys, anikezela kakhulu abantu abaye bavumela i-East India Inkampani ukuba ilawule iIndiya.
Lo mzekeliso ubonisa amalungu e-Madras Army, ayenziwa ngamabutho aseNdiya asekuhlaleni. Ibutho lempi elinobugcisa, lusetyenziswe ukulwa nokuvukela umbuso wama-1800.
Iifom yeenqwelo ezisetyenziswa ngabantu baseBrithani babenemibala enemibala yemikhosi yaseYurophu yaseYurophu kunye nezinto ze-Indiya, ezifana ne-turbans enzulu.
U Nabob waseCambay
Mohman Khaun, uNobob waseCambay. Getty Images
Umlawuli wendawo wayebonakaliswe ngumculi waseBrithani.
Le lithograph ibonisa inkokheli yaseNdiya: "nabob" kwakubizwa ngokuthi igama lesiNgesi elithi "nawab," umlawuli waseMuslim wendawo yaseIndiya. ICambay yayiyidolophu enyakatho-ntshona yeIndiya manje eyaziwayo njengeKambhat.
Lo mzekeliso wabonakala ngo-1813 kwincwadi ethi Oriental Memoirs: Umxholo weeNdawo ezihlala kwi-Seventeen Residence eIndiya nguYames Forbes, umculi waseBrithani owayesebenza eIndiya njengomqeshwa we-East India Inkampani.
Isityikityi esinalo mfanekiso sichazwe:
Mohman Khaun, uNobob waseCambay
Umzobo oshicilelwe ngawo lo owenziwe kwintetho yoluntu phakathi kukaNabob kunye ne-Mahratta inkosi, kufuphi neendonga zeCambay; Kwakucatshangelwa ukuba yinto enamandla, kunye nesimo esifanelekileyo sokugqoka i-Mogul. Kweso sihlandlo uNabob akazange agqoke iigugu, okanye naluphi na uhlobo lwezambatho, ngaphandle kokuba aqokelele ngokutsha ehlangothini lombhobho wakhe.
Igama elithi nabob lenze indlela yalo kwisiNgesi. Amadoda ayenayo inzuzo kwi-East India Inkampani ayesaziwa ukuba abuyele eNgilani aze afumane ubutyebi bawo. Baye bathetha ngokuhleka njengabakwaNobobs.
Iimvumi ezineNyoka yokuDansa
Iimvumi zangaphandle kunye nenyoka eyenzayo. Getty Images
Uluntu lwaseBrithani lwathandwa yimifanekiso yeIndiya yangaphandle.
Ngethuba eliphambi kweefoto okanye iifilimu, iimifanekiso ezifana nale mifanekiso yabanomculo baseNdiya abanomlingo wokudansa babeya kuba banomdla kumbukeli eBrithani.
Olu shicilelo luvele encwadini ebizwa ngokuba yi- Oriental Memoirs nguJames Forbes, umculi nombhali waseBrithani owayehamba kakhulu eNdiya ngelixa esebenza kwi-East India Inkampani.
Kule ncwadi, eyapapashwa kwimimiselo embalwa eqala ngo-1813, lo mzekeliso wachazwa:
Izinyoka kunye nabaculi:
Iqoshwe kumzobo owenziwe ngendawo nguBaron de Montalembert, xa uncedo-de-camp kuMongameli uSir John Craddock eNdiya. Kuzo zonke iinkalo ukumela ngokucacileyo kweCobra de Capello, okanye iNyoka ehlanjisiweyo, kunye nabaculi abahamba nabo eHindostan; kwaye ibonisa umfanekiso othembekileyo wengubo yabemi, ngokuqhelekileyo ihlanganiswe kwii-bazaars kwizihlandlo ezinjalo.
Umqeshwa wesiNgesi wase-East India Inkampani etshaya i hookah. Getty Images
IsiNgesi saseNdiya samukele amasiko athile aseNdiya, afana nokutshaya i hookah.
Inkcubeko eyenziwa eIndiya yabasebenzi be-East India Inkampani elandela amasiko athile xa ehlala eBrithani ngokucacileyo.
IsiNgesi otshaya i hookah ebusweni benceku yakhe yaseNdiya kubonakala ukuba ukhombisa i-microcosm yaseBritani Indiya.
Umzekeliso wawushicilelwe ekuqaleni kwincwadi, i -European In India nguCharles Doyley, eyapapashwa ngo-1813.
U-Doyley wachaza ngokuphrinta ngoku: "Indoda eneHookah-Burdar, okanye uMqhubi wePayipi."
Kwimihlathi echaza isiko, uDoyley uthe abaninzi baseYurophu baseIndiya "bangabakhoboka babo kwiHookah ; ngaphandle kokuba belele, okanye kwiindawo zakuqala zokutya, bebakho."
Umfazi waseNdiya udansa
Ibhinqa elidlalayo lizisa abantu baseYurophu. Getty Images
Ukudansa kwendabuko yaseIndiya kwakubangelwa ngumdla waseBrithani.
Olu shicilelo luvele kwincwadi epapashwe ngo-1813, iYurophu yaseIndiya ngumculi uCharles Doyley. Kwachazwa: "Umfazi oDansa owaziyo, ebonisa phambi kwentsapho yaseYurophu."
UDoyley waqhubeka ngobude obude malunga namantombazana edansa aseIndiya. Wayekhankanya umntu onokuthi, "ngobabalo bentetho yakhe ... ubambe ngokuthobela ngokupheleleyo ... amaninzi amanqaku amancinci amancinci aseBrithani."
Intente yaseNdiya kwiMiboniso Enkulu
Ingaphakathi lentente yama-Indian ekhangayo kwi-Exhibition Great ye-1851. I-Getty Images
I-Exhibition Great ye-1851 ibonise iholo yezinto ezivela eNdiya, kuquka neentente.
Ehlotyeni ka-1851 uluntu lwaseBrithani lwaluphathwa kwimbonakaliso emangalisayo, uMboniso Omkhulu we-1851 . Eyona nto ibonisa ubuchwephesha obubonakalayo, umboniso, obanjwe kwiCallstal Palace eHyde Park, eLondon, ubonisa iimpawu ezivela kwihlabathi jikelele.
Okuphambili kwiCallstal Palace kwakukho iholo lokubonisa izinto ezivela eNdiya , kubandakanywa indlovu enezinto ezithwele. Le thogragrasi ibonisa intente yentente yaseNdiya eyaboniswa kwiMboniso enkulu.
I-British Army iqhubhisa iibhetri e-Battle of Badli-ki-Serai kufuphi neDelhi. Getty Images
Ukuphikiswa kuka-1857 ngokubhekiselele eBrithani kwaholela kwimiboniso yokulwa.
Ngentwasahlobo ka-1857 inani leenqununu zeBengal Army, enye yemikhosi emithathu yemveli ekuqeshweni kwe-East India Inkampani, yavukela umbuso waseBrithani.
Izizathu zazinzima, kodwa esinye isiganeko esabeka izinto kwakusungulwa kwekharityhulam entsha entsha yokubamba igrisi ephuma kwiingulube neenkomo. Iimveliso ezinjalo zezilwanyana zazingavunyelwe kumaSulumane namaHindu.
Nangona i-cartrige yeebhunqa yayingaba yintlobo yokugqibela, ubudlelwane phakathi kwe-East India Inkampani kunye nabantu basekuhlaleni bebehlaselwe ixesha elide. Yaye xa ukuvukela kwaqhambuka, kwaba ngugonyamelo olukhulu.
Lo mzekeliso ubonisa isityholo saseBritish Army unit eyenziwe ngokubhekiselele kwimibhobho ebhetri eyenziwa yimikhosi yaseIndiya.
Iposi eliPhezulu lokuPhatha
Iipotethi zaseBrithani ezibonisa ukubonakala kwithuba lokunyuka kwamaNdiya ka-1857. I-Getty Images
AmaBritani ayeninzi kakhulu ngexesha lokuvukela kuka-1857 eNdiya.
Xa ukuvukela kwaqala eIndiya, amabutho aseBrithani ayeninzi kakhulu. Ngokuqhelekileyo bafumana bezingqonge okanye bajikeleze, kwaye iipokethi, njengalezo ziboniswe apha, zazihlala zijonge ukuhlaselwa kwamandla ase-Indiya.
Amagosa eBritish Hasten ukuya kwi-Umballa
IBritani yasabela ngokukhawuleza ngexesha lovukelo luka-1857. Getty Images
Ibutho laseBrithani elininzi lafuneka lihambe ngokukhawuleza ukunyuka kwi-1857.
Xa i-Bengal Army yavuka ngokumelene neBrithani ngo-1857 impi yaseBrithani yayisongelwa yingozi. Amanye amabutho aseBrithani ajikelezwe aze abulawe. Ezinye iiyunithi zigijimayo zivela kwiikholeji ezikude ukujoyina ukulwa.
Olu shicilelo lubonisa ikholomu yaseBrithani yokuphucula eyayihamba ngeendlovu, inqwelo yenkabi, ihashe, okanye ngeenyawo.
Amagosa aseBritani eDelhi
Amagosa aseBrithani eDelhi Ngethuba lovukelo luka-1857. Getty Images
Amabutho aseBrithani aphumelela ukuphinda aphinde aphinde ahlawule idolophu yaseDelhi.
Ukuvinjelwa kwesixeko saseDelhi kwakuyinguqu enkulu yokuvukela kuka-1857 eBrithani. Amabutho ase-Indiya athathe loo mzi ehlobo le-1857 waza wamisa ukukhusela okunamandla.
Amabutho aseBrithani ayigubungile isixeko, kwaye ekugqibeleni ngoSeptemba bawabuyisela. Lo mfanekiso ubonisa ukuzonwabisa kumatrato emva kokulwa okunzima.
Inkosikazi yaseVictoria kunye namaNdiya
UKumkanikazi waseVictoria, uMpress waseIndiya, nabakhonzi baseNdiya. Getty Images
Inkosi yaseBrithani, uKumkanikazi waseVrithani, yayithandwa yiIndiya kwaye yagcinwa ngabakhonzi baseNdiya.
Emva kokuvuswa kuka-1857-58, ukumkani waseBrithani, u-Queen Elizabeth, waphula i-East India Inkampani kunye noRhulumente waseBrithani bathatha ulawulo lwaseIndiya.
Indlovukazi, owayenomdla kakhulu eNdiya, ekugqibeleni wongeza isihloko esithi "Impress of India" kwisihloko sakhe sobukhosi.
UKumkanikazi uVictoria naye waqhelana kakhulu nabakhonzi baseNdiya, njengalezo ziboniswe apha kwindwendwe kunye nenkosikazi kunye namalungu entsapho yakhe.
Kuphela kwinqanaba lokugqibela leXesha le-19 uBukumkani baseBrithani, kunye noKumkanikazi waseVictoria, babambe iqhosha laseIndiya. Ngekhulu lama-20, ngokuqinisekileyo, ukumelana nokulawula kweBrithani kwakuya kwanda, kwaye iIndiya yayiza kuba lizwe elizimeleyo.
Yintoni eyenzekayo kwiJamani yokuSebenza kwamaJamani?
Iincwadi Eziphezulu: I-Russia Yomhla-I-Revolution ne-After
Imbali kunye nokuPhilisa Ukusetyenziswa kweziBhola zoBuTshayina
Iiklabhu ze-Golf zeVapor Fly Golf
Ukufunda i-7 Chords kwiGititar
Amanqaku aphezulu amaninzi e-Grunge
Ukubulawa kukaRobert Kennedy
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Uncedo" (ukuNceda)
Vérifier - Ukuqinisekisa
I-Arrhenius Base Definition
I-Oglethorpe University Admissions
Iincwadi eziphezulu zeZithombe zeBantwana malunga nokufa kwePet
Umzekeliso ngeNyathelo-ngeNyathelo Ixesha elide loPhuhliso lweJump
IYunivesithi yaseLoyola eNew Orleans iGPA, iSAT kunye noMthetho we-ACT
Iingxaki zeBakala zeMatriki zeBakala lesi-4
Ukuzinikela: Isipho soMoya oyiNgcwele
Ukongeza kunye nokukhupha iiPolynomials
I-Lightsaber - I-Jedi Weapon kwi-Star Wars
Izizwe ezisixhenxe zeNkathazo
Isiqalo sesiJamani: Yivayo kwaye Ufunde AmaLungu eNtsapho
Umlinganiselo: Zheng He kunye neFleet Fleet
UTadedi: Umpostile Onamagama amaninzi
Ukuqala Ukubhala - Ukufutshane Ukubhala Izabelo